ပုဂံခေတ် အနော်ရထာလက်ထက်ကတည်းက မင်းမှုထမ်းအဖြစ် စစ်ရေးဘက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ပင်းယအင်းဝမှသည် တောင်ငူခေတ်အဆက်ဆက် ညောင်ရမ်းခေတ် ဘုရင်နောင်လက်ထက်တွင် တပ်မှူး ပုဂံမင်းမင်းတုန်းမင်းသီပေါမင်းလက်ထက်တို့တွင် တပ်ချုပ်…. ကိုယ်ရံတော်တပ်မှူး အမြှောက်တပ်မှူး အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးဗိုလ်ကြီး ဆရာစံသူပုန်အဖွဲ့ အသေခံတပ်သားအဖြစ်လည်းကောင်း ဂျပန်ခေတ်တွင် ဘီအိုင်အေ ဘီဒီအေ ဗိုလ်ကြီးများအဖြစ်လည်းကောင်း လွတ်လပ်ရေးရပြီးတွင် ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းသူများကို တိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းခဲ့သော မြန်မာ့တပ်မတော် ဗိုလ်မှူးအဖြစ်လည်းကောင်း….. ချန်ကေရှိတ်ကို အသက်စွန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ဗိုလ်ကြီး အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် မိမိတို့၏ ဘိုးဘေးဘီဘင် များမှ ဆင်းသက်လာသော မိမိတို့မှာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာမတူညီသည့်အတွက် ဧည့်သည်(ဧည့်သည်)များ ဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည် ငှက်မသိတော့ဇရက် ဂျိုး ထင်
This entry was posted on March 3, 2015 at 9:35 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
drkokogyi Says:	March 3, 2015 at 9:47 am | Reply Yemin Nyinyi
drkokogyi Says:	March 3, 2015 at 10:00 am | Reply Yemin Nyinyi